ဘလောဂ့် ဘာလဲ……… ဘယ်လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘလောဂ့် ဘာလဲ……… ဘယ်လဲ
ဘလောဂ့် ဘာလဲ……… ဘယ်လဲ
Posted by manawphyulay on Dec 15, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
ရုန်းမထွက်နိုင်သေး ဒီဘ၀ ကြုံဆုံမိသမျှ ဒီလောက
– ဘလော့တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းရန် လွယ်ကူသည်၊ ပို၍ အသက်ဝင်လှုပ်ရှား ရှင်သန်နိုင်သည်။ ပို၍ အသစ်များကို အမြဲတင်ပို့နိုင်သည်။
– လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ဆန် ရေးသားတင်ပြနိုင်သော၊ ပွင့်လင်းရင်းနှီးချက်များဖြင့် တန်ဆာဆင်နိုင်သည်။
– လာရောက်လည်ပတ်သော အခြား စာဖတ်သူများ၊ အခြားဘလော့ဂါများနှင့်လည်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သည်။
– ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ဘလော့များတွင် တစ်စုံတစ်ရာ တူညီသော စံသတ်မှတ်ချက်ရှိနေပြီး ပုံစံတူ နည်းပညာများကိုလည်း သုံးစွဲနေကြပါသည်။
ကျွန်မတို့ လို ကိုယ် သိတာလေးတွေ ၊ကိုယ်ေ၇းချင်တာလေးတွေ အများကို ဖြန့် ဝေပေးချင်နေတဲ့ သူ အတွက် မနော၇ဲ့ ပို့ စ်လေး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဘလော့ ဆို တာဘယ်လို ၊ဘလော့ ဂါဆိုတာ ဘာလဲ ..စသည်ဖြင့် ပေးပါတယ်။
စာေ၇းချင်တဲ့ လူတွေ၊စာေ၇းနေတဲ့ လူတွေအတွကိပိုိုကောင်းတဲ့idea တွေ ထွက်လာအောင် -ဥပမာ
အများအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ဘလော့ တခု ကို ဘယ်လို ဖန်တီးရမလဲ ……..
စိတ်ဝင်စားအောင် ဘယ်လို တင် ပြမလဲ ……….
နောက်တော့ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားတဲ့ website ကို အစဉ်ရှင်သန်အောင် ဘာတွေလုပ်၇မှာလဲ ….
စတဲ့idea လေးတွေ ကို မျှဝေပေးလို့…မနောေ၇…..ကျေးဇူး အထူးပါနော်။
အကြိုက်ဆုံး idea ကတော့ ………..အများပြည်သူဆိုင်ရာ လူသားအားလုံးအတွက် နည်းပညာတွေ၊ ပညာဗဟုသုတ ဖလှယ်မှုတွေ ကိုယ်စွမ်းရှိသလောက် ဘယ်လို ဖြန့်ဝေသွားမလဲဆိုတာပါပဲ။
ကိုရင်က အရင်က ဘလော့ရေးဘူးတယ်… အဲ့တုန်းက ဘလော့ဂါစည်သူ
အခုတော့ ကိုရင်ဝတ်ရင်းနဲ့ပဲ ဂေဇက်ထဲ ရွာသားလုပ်လိုက်တော့…………
ဂေဇက်ဂါကိုရင်စည်သူ … ဟီး…
ခင်ညားဂျီးကသာ ပလောဂါ ဘာရယ် ဖယ်လဲ လုပ်နေတာ ရွာအနောက်ပိုင်းမှာတော့
“စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဆိုတာက ငပျင်းတွေ လက်ကြောမတင်းသူတွေကွ”…………….. ဆိုပြီး အရူးတစ်ယောက် အော်နေပါ့လား …..။ သဂျီးကလည်း ဘာမှ မလုပ်သေးဘူး……..။
လေးနီရေ… မနောကတော့ ဘယ်သူဘာဆိုတာထက် ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ ဝေဖန်စမ်းစစ်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါစေ… ၀ါသနာရယ်၊ ဆန္ဒရယ် ပေါင်းစပ်ပြီး သွားနေတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲ သွားနေမှာပါ။ ဒီလိုပြောကြေးဆိုရင် ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက ကနောင်မင်းသားတို့၊ မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစတို့ကရော…… အင်း… မပြောတော့ပါဘူးလေ။ ဒီလို လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအရေးတွေ ရှိနေကြမှာပါပဲ။ သူလည်း သူ့အတွေးပေါ့လေ….. လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေဦးမှာပါပဲလေ….
ဗယ်ဂေါင်ဓွေလဲးဃွ…နန်မရ်ဝှပ်နယ့် imtarnat မှါဆာယေးဒါ။ :mad:
ဦးကြောင်ကြီး ဘာ ဘာသာစကားလဲဟင်… နားမလည်လို့
ထရိုင်ယို ခာလာ သင်ရိုး လေ့လာနေပါတယ်နော….
ကျုပ်လက်ခံထားတဲ့ သီအိုရီ နဲ့ နည်းနည်းလေး မူကွဲဖြစ်နေတယ်ဗျ…
ဒီနှစ်ထဲတော့ အစ်မတော်ရဲ့ ဘလောဂ့် ကို သိပ်လာလည်နိုင်တော့မည်
၁ လပိုင်းတော့ ထပ်လာလည်ဦးနော်… ဒီနှစ်ထဲလည်း သိပ်မရေးနိုင်တော့ဘူး။ နည်းနည်းလေးများ လက်ကြောတင်းတင်းနေကြည့်မလားလို့လေ…